Podcast: Inona ny Unfreedom Monitor? · Global Voices teny Malagasy
Itantaran'ny tonian-dahatsoratra sy mpandray anjara ny zavamisy any amin-dry zareo
Voadika ny 11 Avrily 2022 4:16 GMT
Amin'ity herinandro ity isika miresaka amin'i Nanjala Nyabola, talen'ny Advox, ilazany amintsika momba ny tetikasa fikarohana farany an'ny Advox: Unfreedom Monitor. Ny Unfreedom Monitor dia tetikasa mamakafaka, mandrakitra sy mitatitra momba ireo fitomboan'ny trangan-javatra amin'ny fampiasana ny teknolojiam-pifandraisana ankihy (nomerika) mampivelatra ny fitondrana tsy refesi-mandidy. Firenena miisa 11 – Brezila, Ekoadaoro, Ejipta, India, Maraoka, Myanmar, Rosia, Sodàna, Tanzania, Torkia ary Zimbaboe no fakafakain'ireo mpikaroka – sy lohahevitra efatra mifamatotra momba ny fitondrana tsirefesimandidy ankihy mba hamolavolana fomba fiasa azo ampiasaina ao anatin'ny tokotanin-tsehatra — fitantanana angon-drakitra , lahateny, fahafaha-miditra, torohay. Hitanao ato [mg] ny tatitra fohy momba azy ity.
Mitondra ho anao ny vaovao any an-toerana avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao ny Rakipeo Global Voices. Isan-kerinandro, mizara ny vaovao manan-danja indrindra ao amin'ny vondrom-piarahamoniny avy any ireo ao amin'ny vondrom-piarahamoninay sy ny fomba famolavolany ny tantarany avy amin'ny zava-misy eo an-toerana. Henoy ary izao ny vaovao manerantany atolotra anao isan-kerinandro avy amin'ny feo any an-toerana.
Raha nahafinaritra anao ity fizarana ity, dia mamandriha ary lazao amin'ny namanao ny momba anay! Afaka manjohy anay amin’ny Twitter ianao. Ny mozika ato amin'ity rakipeo “Voyage” ity dia avy amin'ny feonkiran’i NikMartken ato amin'ny vondrom-piarahamoninay Global Voices ankapobeny.
Miangavy tsidiho ny pejin'ny tetikasa raha hijery lahatsoratra bebe kokoa avy amin'ny Unfreedom Monitor.